Vaovao - Inona no atao hoe Metaverse？ Ary inona no zavatra vaovao raisin'izy ireo amin'ny fiainantsika？
Inona no atao hoe Metaverse？ Ary inona no raisin'izy ireo zava-baovao amin'ny fiainantsika？
Amin'ny tontolo virtoaly, ny zavatra mitaky simulate be ary miasa mafy dia ho lasa tsotra, ka tsy mila ny fandefasana kaody fotsiny hamita ny fiofanana, ary mihoatra lavitra noho izany ny eritreritra an'ity tontolo virtoaly ity, toa efa manana ny ankamaroany ny fahaiza-manaon'ny toerana misy antsika.
Facebook, Epic Games ary orinasa hafa dia mampiasa vola be amin'ny famoronana metaverse, izay nandritra ny fotoana ela dia teny iray ihany no hita tao amin'ny tantara foronina momba ny siansa dystopiana. Ny dikan'izany dia hoe raha tokony hifanerasera amin'ny namanao amin'ny Internet toy ny tranga ankehitriny dia azonao atao ny mihaona amin'izy ireo amin'ny tontolon'ny dizitaly amin'ny avatar nomerika misy anao, amin'ny alàlan'ny headset virtoaly virtoaly na fitaovana hafa
Ny metaverse voalohany indrindra dia noforonina tao amin'ny bilaogy cyberpunk tamin'ny taona 1992 《Snow Crash》. Ao amin'ity boky ity, ilay protagonista Hiro Protagonist dia mampiasa ny Metaverse ho fialana amin'ny fiainany. Amin'ny tantara, ny Metaverse dia sehatra famoronana virtoaly. Saingy feno olana ihany koa, toy ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia, fanavakavahana, fanorisorenana ary herisetra, izay miraraka amin'ny tontolo tena izy indraindray.
Boky iray hafa - sarimihetsika notarihin'i Steven Spielberg taty aoriana - izay nalaza tamin'io hevitra io dia Ready Player One. Ny boky 2011 nosoratan'i Ernest Cline dia natsangana tamin'ny 2045, izay nandosiran'ny olona ny lalao zava-misy virtoaly satria tafiditra anaty krizy ny tontolo tena izy. Amin'ny lalao dia mifanerasera amin'ny mpilalao hafa ianao ary miara-miasa amin'izy ireo.
Nandeha nandroso ny andiany Japoney Sword Art Online (SAO) 2013, miorina amin'ny tantara hazavana foronina amin'ny siansa mitovy anarana amin'i Rei Kawahara. Napetraka tamin'ny 2022, ao amin'ny lalao, mandroso be ny teknolojia ka raha maty amin'ny tontolo virtoaly ny mpilalao dia ho faty amin'ny fiainana tena izy koa, mitarika ny fitsabahan'ny governemanta. Na dia somary mahery aza ity tontolo noforonina tao amin'ny SAO ity, tsy voafetra amin'ireo famaritana ireo avy amin'ny siansa foronina. Mety ho betsaka kokoa, na latsaka, rehefa mivoatra ny tontolo iainana. Araka ny fanazavan'i Zuckerberg nandritra ny fiantsoana vola tamin'ny volana lasa teo, “Tontolo iainana virtoaly ahafahanao miaraka amin'ireo olona amin'ny sehatra dizitaly. Azonao atao ny mieritreritra an'ity ho toy ny Internet miorina amin'ny tena izay ao anatiny fa tsy mijery fotsiny. Mino izahay fa io no ho mpandimby ny Internet finday. ”Ny dikan'izany dia hoe raha tokony hifanerasera amin'ny namanao amin'ny Internet toy ny zava-misy ankehitriny, dia afaka mihaona amin'ny avatar nomerika tsirairay avy ianao, amin'ny fampiasana headset virtoaly na zavatra hafa fitaovana, ary midira amin'ny tontolo virtoaly, na birao, kafe na ivon-toerana filalaovana mihitsy aza.
Ka inona no atao hoe metaverse?
Ny metaverse dia tontolo virtoaly mifandraika amin'ny tontolo iainantsika sy zarain'ny olona marobe. Manana endrika endrika sy toekarena misy izy, ary manana avatar tena izy ianao, na olona tena izy na toetra amam-panahy. fotoana miaraka amin'ny namana, hifandray ianao, ohatra.
Amin'ny ho avy dia mety honina ao amin'ny médiverse-izao isika izao, mety ho metaverse fifandraisana, tsy fisaka fa sehatra stereoscopic 3D, izay ahafahantsika mahatsapa ireo sary nomerika eo akaikin'ny tsirairay, amin'ny karazana dia lavitra. Mety hanahafana ny ho avyMisy karazana metaverse marobe, ohatra, ny lalao video dia iray amin'izy ireo, ary ny Fortnite dia hivadika ho endrika metaverse, na ny derivative sasany avy aminy. Azonao an-tsaina fa ny World of Warcraft dia hivoatra amin'ny endrika metaverse indray andro any, hisy ny kinovan'ny lalao video, ary hisy ny kinova AR. Azonao atao ny mametraka ny solomaso antsika, na ny findainao. Afaka mahita an'ity tontolo virtoaly ity ianao Eo alohanao, mirehitra tsara, ary anao izany.Ho hitantsika eo ambonin'ity tontolo voajanahary ity ity sosona nopotserina ity, izay mety ho karazana sosona superimposed metaverse raha tianao. , ary ny hery misintona eto amin'ity izao tontolo izao ity, saingy mazava ho azy fa azonao atao ny manova azy araka ny itiavanao azy.Koa ankoatry ny fanandramana ny tena kinovan'ny My World, ny fahafaha-manao raharaham-barotra dia tsy misy farany. Ao amin'ny sehatra metaverse indostrialy, iray amin'ireo teknolojia manan-danja indrindra dia tontolo iainana VR miorina amin'ny simulation ara-batana. Manamboatra zavatra amin'ny metaverse ianao ary raha hatsipinao amin'ny tany dia hianjera amin'ny tany izy satria mankatoa ny lalàn'ny fizika. Ny tarehin-jiro dia hitovy tanteraka amin'ny fahitantsika azy ireo, ary ny fitaovana dia hatao tahaka ny ara-batana. ”
Ary amin'izao fotoana izao Omniverse, fitaovana hananganana an'ity tontolo virtoaly ity, dia misokatra beta ary andrana amina orinasa 400 manerantany. Io dia ampiasain'ny BMW hamorona orinasa nomerika. Izy io koa dia ampiasain'ny WPP, masoivohon'ny dokam-barotra lehibe indrindra eto an-tany, ary ampiasain'ny mpanao arafitra simulation lehibe izy io.
Raha fintinina, Omniverse dia ahafahan'ny olona maro miara-mamorona atiny ao anaty lampihazo, ahafahan'ny tsirairay mamorona sy maka tahaka ny tontolo 3D virtoaly ifampizarana izay mifanaraka amin'ny lalàn'ny fizika ary mifanaraka tanteraka amin'ny tontolo tena izy, toy ny tontolo virtoaly noforonina 1: 1 miaraka amin'ny tena angon-drakitra.
Ny vina sy ny fampiharana ny sehatra Omniverse dia tsy hoferana ho an'ny indostrian'ny lalao sy ny fialamboly ihany, fa koa ny maritrano, ny injeniera ary ny fananganana ary ny fanamboarana. Orinasa miditra amin'ny tontolo iainana Omniverse. Ny fidirana amin'ny Nvidia Omniverse Enterprise Edition dia efa 'voarara' ary azo jerena amin'ny sehatra toa an'i ASUS, BOXX Technologies, Dell, HP, Lenovo, Bienvenue ary Supermicro.
Mazava ho azy fa misy làlana maro azo isafidianana amin'ity tontolo virtoaly ity. Ho an'ny indostrian'ny kodia, ny sandam-bola tsotra indrindra amin'ny tontolo virtoaly dia ny fanaovana haingana kokoa ny fampandrosoana ny kodiarana avo lenta. fanahafana ny angon-drakitra sarintany, azo alain-tahaka ny fanahafana ho fanandramana. Ho fanampin'ny fitomboan'ny fahombiazana, ny fiarovana sy ny fandaniana dia hihena be.
Ohatra, ny fitsapana fahombiazan'ny kodiarana dia matetika atao amin'ny ozinina miaraka amina fitsapana fiatraikany tsotra be, izay tsy ampy hizaha toetra ny lafiny rehetra amin'ny fahombiazan'ny kodiarana. Ny fampifangaroana ny olona nomerika sy ny teknolojia nomerika toy ny rendering dia ahafahan'ny fanahafana ny fanoherana ny fiara amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fanoherana ny harafesin'ny kodiarana amin'ny toetry ny andro eo ambany fiofanana momba ny tontolo iainana namboarina. dia hivadika ho tsipika kaody hikajiana sy hianarana any aoriana, ary ilay rindrambaiko voadio dia azo ampiharina mivantana amin'ny zava-misy.
Ary ho an'ny ho avy, ho antsika tsirairay avy dia ny fifandimbiasana sy fampifangaroana ny habaka tena izy sy virtoaly, ahafahanao milalao famantarana marobe na milentika amin'ny toerana hafa hahitanao tena hafa. Azonao adika ho toy ny tontolon'ny tontoloko tena misy, na amin'ny maha-simulator map GTA5 tsy manam-petra izay maka tahaka an'izao rehetra izao.